सिभिल बैंकले डिबेञ्चर निष्काशन गर्ने भएको छ । जसका लागि बैंकले ग्लोबल आइएमइ क्यापिटलसंग सम्झौता गरेको छ । सिभिल बैंकले वार्षिक ११ प्रतिशत ब्याजदर भएको ५ वर्षे अवधिको प्रतिकित्ता डिबेञ्चर अंकित मूल्य एक हजारको दरको ५० लाख कित्ता डिबेञ्चर “सिभिल बैंक डिबेञ्चर २०८४” को सार्वजनिक गर्ने भएको हो । व्यक्तिगत तवरले निष्कासन गर्नका लागि निष्काशन […]
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको धितोपत्र कारोबार फुकवा भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) ले कम्पनीका आधारभुत शेयरधनीहरु बाहेकका शेयरधनीको धितोपत्र जेठ १६ गते सोमवारदेखि फुकुवा भएको हो । शेयर कारोबार फकुवा भएसँगै कम्पनीको शेयरमूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू.४०५ मा खुला भएको थियो । खुला भएसँगै शेयरमूल्य ९ दशमलव ९९ प्रतिशत घटेर […]
बलेफी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि १८ करोड २७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ बिक्री खुल्ला गरेको छ । कम्पनीले आजबाट प्रतिशेयर १०० अंकितमूल्यका १८ लाख २७ हजार ९७० कित्ता आईपीओ बिक्री खुल्ला गरेको हो। निष्काशन गरिने कुल शेयरमध्ये ४ प्रतिशत अर्थात ७३ हजार ११९ कित्ता शेयर कम्पनीका कर्मचारीहरुका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने […]
नेपाली धितोपत्रको दोस्रो बजारका लगानीकर्ताहरु अहिले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको पर्खाइमा रहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले यही साता मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने तयारी थालेसँगै लगानीकर्ताहरु समीक्षामा के आउने हो भन्ने पर्खाइमा पुगेका हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर बढाएसँगै उच्च दरले घटेको बजारमा अब मौद्रिक नीतिको समीक्षाले केही मलम लगाउने अपेक्षा लगानीकर्ताहरुले गरेका छन्। […]
हिजो सोमवार साढे १४ अङ्कले घटेको शेयर बजार आज मङ्गलवार १९ अङ्कभन्दा धेरैले बढेको छ । शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज १९ दशमलव २६ अङ्कले बढेर दुई हजार आठ सय ९१ दशमलव ३४ विन्दुमा पुगेको छ । आज सबैजसो समूहको शेयर बढेकोमा जलविद्युत् समूहको शेयर एक सय नौ अङ्कले, विकास बैंक समूहको १, माइक्रोफाइनान्स समूहको […]
शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज मङ्गलवार पनि बढेको छ । हिजो सोमवार १९ अङ्कले बढेको नेप्से आज ४९ दशमलव १९ अङ्कले बढेर दुई हजार आठ सय ३४ दशमलव १३ विन्दुमा पुगेको छ । आज उत्पादनबाहेक सबै समूहको शेयर बढेको छ । सबैभन्दा धेरै फाइनान्स समूहको शेयर बढेको छ । आज दुई सय ३२ वटा कम्पनीको […]
शेयर बजार आज पनि बढ्यो, ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको कारोबारशेयर बजार परिसूचक नेप्से आज सोमवार पनि बढेको छ । हिजो आइतवार ७३ अङ्कले बढेको शेयर बजार आज १९ दशमलव ४३ अङ्कले बढेर दुई हजार सात सय ८४ दशमलव ९५ विन्दुमा पुगेको छ । आज बैंकिङ, होटल–पर्यटन र उत्पादन समूहबाहेक अरू सबै समूहको शेयर बढेको छ […]
सीईओ छनोटको लागि नेप्सेमा ५ जनाको अन्तरवार्ता आइतबार
नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बन्नका लागि ११ जनाले आवेदन दिएकोमा पाँच जनाको नाम सर्टलिस्ट मा परेको छ । (सीईओ) बन्न छनोटका लागि पाँच जना संक्षिप्त सूचीमा परेकाहरुलाई छनोट समितिले अन्तरवार्ताका लागि आइतबार बोलाइएको हो । कृष्णबहादुर कार्की, डा. केशवप्रसाद श्रेष्ठ, प्रविन पन्दाक, रमेश घिमिरे र डा। रमेश भण्डारीको नाम सर्टलिस्टमा […]
साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सेयरधनीहरुलाई दिने लाभांश पारित गरेको छ । संस्थाको २० औं वार्षिक साधारणसभाले उक्त लाभांश पारित गरेको हो । साधारणसभाले सेयरधनीहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आम्दानीबाट २५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १.३१५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । सम्पन्न सभामा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षले सञ्चालक […]
सोमबार नेप्सेमा सांग्रिला डेभलपमेण्ट बैंकको बोनस शेयर सूचीकृत भएको छ । कम्पनीको २७ लाख ३६ हजार ९७२ दशमलव ४२ कित्ता बोनस शेयर सूचीकृत भएको हो । अव यो बोनस शेयर हितग्राही खातामा आएपछि लगानीकर्ताले खरीद विक्री गर्न सक्नेछन् । कम्पनीले कात्तिक १६ गते सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाबाट पारीत १० प्रतिशत बोनस शेयर सूचीकृत गराएको हो […]
निफ्राको ८.४२ प्रतिशत लाभांश बुधवार पारित
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । सभा बुधवार अनुमप फुडल्याड एण्ड ब्याक्वेट बत्तिसपुतली काठमाडौंमा सम्पन्न भएको हो । सभाले ८ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि शून्य दशमलव ४२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारीत गरेको छ । साथै सभाले २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारुति गर्ने […]
प्रभु बैंकले लाभांश घोषणा गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट बैंकले सेयरधनीलाई १२.६३ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको हो । बैंकको मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले १२ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.६३ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय भएको बैंकका सीइओ अशोक शेरचनले जानकारी दिए । उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति तथा बैंकको आगामी वार्षिक […]
आइसिएफ़सी फाइनान्सले गत आर्थिक बर्षको लाभांश घोषणा गरेको छ। फाइनान्सको असोज २५ गते बसेको २८७ औं संचालक समितिको बैठकले आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ को मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १४ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको नेप्सेले जनाएको छ। आईसीएफसीले १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजन सहित ४ प्रतिशत नगद गरि कुल १४ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो। […]
कुमारी बैंकले गत वर्षको नाफाबाट ८.६७ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ। बैंकले ६ प्रतिशत बोनस सेयर र करसहित २.६७ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेको हो। बैंकले गत आर्थिक वर्ष १४ प्रतिशत लाभांस दिएको थियो भने त्यसभन्दा अघि १०.५३ प्रतिशत दिएको थियो। यसको एक वर्षअघि साढे ८ प्रतिशत दिएको थियो। बैंकको चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ८७ […]
साहस उर्जा लिमिटेडले यही असोज ६ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ। कम्पनीले सर्वसाधारणमा ७० करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० अंकित मूल्यका ७० लाख कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्ने भएको हो । निष्काशन गरिने कुल शेयरमध्ये ३ प्रतिशत अर्थात २ लाख १० हजार कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका […]
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको 8.5% RBBL Debenture, 2083 नामको ऋणपत्र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा कारोवार हुन सक्ने गरी सोमबार सूचीकरण गर्ने सम्झौता सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरन्जन फुयालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । बैंकले ६ वर्ष अवधि भएको वार्षिक […]
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमीटेडले हालै निश्कासन गरेको ऋणपत्र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमीटेड (नेप्से)मा सूचीकृत भएको छ । सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड र सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडबीच ९ प्रतिशत व्याजदर भएको “सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक डिबेञ्चर/ऋणपत्र २०८७” नामको ऋणपत्र सूचीकरणको सम्झौता भएको हो । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको प्रतियूनिट रु. १००० मूल्य कायम भएको कुल ७ लाख […]
मुक्तिनाथ विकास बैंक लि. र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडका बीच ८.७५ प्रतिशत ब्याजदर भएको मुक्तिनाथ डिबेञ्चर÷ऋणपत्र २०८४÷८५ को क्रम संख्या १ देखि १२,५०,००० सम्मको अंकित तथा चुक्ता मूल्य रु. १०००÷– कायम भएको कुल १२,५०,००० कित्ता थान ऋणपत्रको सूचिकरण गर्ने सम्झौता सम्पन्न भएको छ । बैंकले सर्वसाधारण समक्ष सानिमा क्यापिटल लि.(धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक कम्पनी) […]
लक्ष्मी बैंकद्वारा निष्काशित २ अर्ब रुर्पैयाँ मूल्य बराबरको “८.५ प्रतिशत लक्ष्मी बैंक डिबेन्चर, २०८८” नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचिकृत भएको छ । सूचिकरण पश्चात सो ऋणपत्र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा दोस्रो बजार कारोबार हुने छ । विहीबार एक कार्यक्रमबीच सो ऋणपत्र सूचिकरण गर्ने सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरन्जन फुयाल […]
धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज झिनो अङ्कले मात्रै सुधार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से १.१८ बिन्दुले सुधार भई दुई हजार ९७७.०२ मा पुगेको छ । यस्तै, ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ०.१७ बिन्दुले बढेर ५५०.६९ मा पुगेको छ । कूल २२६ कम्पनीको एक करोड ७१ लाख […]
सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको आइपीओ दोस्रो बजार सुचिकृत भएको छ । आज कम्पनी र नेप्सेबीच दोस्रो बजारमा आइपीओ सुचिकृत गरी कारोबारका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतामा नेप्सेका तर्फबाट निमित्त सीईओ निरन्जन फुयाल र कम्पनीका तर्फबाट सीईओ अगम मुखियाले हस्ताक्षर गरेका छन्। कम्पनीको २ करोड कित्ता आइपीओ सुचिकृत भएको हो । यससँगै अब कम्पनीको […]